The University of Melbourne - Waxbarashada Sare ee Australia
aasaasay : 1853
Ha iloobin in aad wada hadlaan The University of Melbourne
Qorto The University of Melbourne
The University of Melbourne (aan rasmi ahayn Melbourne University, Melbourne Kingdom ama si fudud Melbourne) waa jaamacad ah publicresearch Australia ku yaal Melbourne, Victoria. aasaasay sannadkii 1853, waa jaamacadda labaad ee ugu da'da weyn Australia iyo ugu da'da weyn ee Victoria. Tacliinta Sare Times kaalinta Melbourne sida 33aad ee dunida, halka Waxbarashada saraysiinta ee Jaamacadaha World meelaha Melbourne 44aad ee dunida (labada ugu horeysay ee Australia). Sida laga soo xigtay qiimeynta Subject QS World University 2015, Jaamacadda Melbourne waxaa kaalinta 5-aad ee dunida waxbarashada, 8th sharciga, 13-aad ee sayniska kombiyuutarka iyo IT, 13-aad ee fanka iyo culuumta, 14-aad ee xisaabiyenimo iyo maaliyadda, 14-aad ee ilkaha iyo 18aad ee daawo.
campus weyn ee Melbourne ayaa waxa uu ku yaalaa Parkville, ah waqooyiga xaafada hoose ee degmada Melbourne ganacsiga bartamaha, dhowr xarumood oo kale oo ku yaalla guud ahaan Victoria. Melbourne waa jaamacad sandstone ah iyo xubin ka tirsan Group of Siddeed, jaamacad 21 iyo Association of Pacific Rim Jaamacadaha. Tan iyo markii ay 1872 kulliyadaha kala duwan ee la deggan yahay waxay noqdeen xiriir la leh jaamacadda. Waxaa jira 12 kulliyadaha ku yaalla xarunta weyn iyo agagaarkeedii dhow bixiya tacliinta, Isboortiga iyo dhaqanka barnaamijyada garab hoyga ee ardayda iyo macalimiinta Melbourne.
Melbourne kooban 11 halbeeg tacliineed oo kala duwan oo la xidhiidha machadyada badan iyo xarumaha cilmi-baarista, ay ka mid yihiin Walter iyo Eliza Hall Institute of Research Medical, Florey Institute of Neuroscience iyo Caafimaadka Maskaxda, Machadka Melbourne ee Applied dhaqaalaha iyo Research Social iyo Institute Grattan ah. Mida Melbourne ee 15 dugsiyada graduate Business School Melbourne, Law School Melbourne iyo Dugsiga Caafimaadka Melbourne waxaa si gaar ah si fiican loo arkaa.
Afar wasiir Ra'iisul Australia iyo shan taliyayaal-guud ka qalin Melbourne. Sagaal Laureates Nobel ayaa ardayda ama macalimiinta, ugu of jaamacadaha Australia kasta.
The University of Melbourne jecel yahay sumcad fiican leh qiimeynta adduunka si joogto ah noo soo geliya sidii jaamacadda cilmi-degdeg ah oo dhamaystiran Australia ayaa keentay, iyo mid ka mid ah kooxda aduunka ugu fiican 50.
Melbourne jiidata ee ardayda iyo cilmi fiican oo ifka iyo, oo leh taariikh ka badan 160 sano, waxaan mashquulin meel gaarka ah ee wadnaha ee goobta dhaqan magaalada ee.
Melbourne Ganacsiga School
Melbourne ilkaha School
Melbourne Graduate School of Waxbarasho
Xafiiska Barnaamijyada Deegaanka
Melbourne School of Dowladda
Melbourne School of Sciences Caafimaadka
Melbourne School of Macluumaad
Melbourne Caafimaadka School
Melbourne Conservatorium ah Music
Melbourne School of Dadka iyo Global Health
The Kuliyada Science
Kulliyadda Caafimaadka xoolaha iyo beeraha Sciences
College ee Victoria oo ka mid ah Arts (VCA)
The University of Melbourne waxaa la aasaasay by Hugh Childers, Hanti-dhowraha Guud iyo Wasiirka Maaliyadda, in uu marka hore Miisaaniyadda Hadalka 4 November 1852, Yaase u soo leexan dhigay lacag dhan £ 10,000 ee aasaaska jaamacad. Jaamacadda waxaa la aasaasay by Act of Sharciyaynta naaddiga on 22 January 1853, isagoo leh xoog darajooyin guddoonsiiyaa farshaxanka, daawo, sharciyada iyo music. Sharcigu wuxuu siiyaa hibeynta sanadle ah £ 9,000, halka deeq gaar ah oo ah £ 20,000 waxaa loo sameeyey, waayo, dhismayaasha sannaddaas. dhagax dhigay ayaa waxaa la dhigay on 3 July 1854, oo isla maalintaas dhagax dhigay ee Fasalada Library Gobolka bilaabay in 1855 saddex Professor iyo lix iyo toban ardayda; ee jirka ah ee ardayda, kaliya afar ka qalin. The dhismayaasha asalka ah ayaa si rasmi ah u furay by Guddoomiyaha Lieutenant reer Colony ee Victoria, Sir Charles Xootaam, on 3 October 1855. madax sare ayaa marka hore, Redmond Barry (ka dib Sir Redmond), qabtay jagada ilaa dhimashadiisii 1880.
caleema saarka ee jaamacadda waxaa suurto by maalka ka dhasha dahabka Victoria ee. hay'adda ayaa waxaa loogu tala galay in ay noqon a “saamaynta civilizing” waqti of dejinta degdeg ah iyo koboca ganacsiga.
In 1881, gelitaanka haweenka waxaa a arkaa badiyeen golaha more muxaafidka ah talada haya.
-guuradii 150aad ee jaamacadda ee loo dabaal in 2003.
Ma rabtaa wada hadlaan The University of Melbourne ? su'aal kasta, comments ama dib u eegista
Photos: The University of Melbourne rasmiga ah Facebook
The University of Melbourne dib u eegista
Ku biir si ay ugala hadlaan of The University of Melbourne.